Waxbarashada iyo Tababaridda Wood - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > koorsooyinka our > Dhismaha & Wood
Waxaad ku takhasustay qurxinta iyo dhamaystirka gudaha.
Waxaad baraneysaa wax walba oo ku saabsan rakibidda kuleylka dhexe iyo tuubista. Waxaad baraneysaa wax walba oo ku saabsan tuubista. Labada waxbarasho, waxaan kuu diyaarineynaa inaad ka shaqeysid shirkad dhexe oo kuleyliyaha ama tuubiste. Koorsadani waxay buuxisaa xirfad khafiif ah.